Mahatonga an’i Karaiba hirehareha ny Google Doodle-n’ny Sir Arthur Lewis, ekonomista sy efa nahazo ny loka Nobel · Global Voices teny Malagasy
"Toy ny lazan'i Bob Marley amin'ny mozika ny lazany amin'ny toekarena"
Voadika ny 26 Marsa 2021 4:34 GMT
Faly am-pitalanjonana ny mpisera karaibeana Rehefa niditra tao amin'ny mpitety [browser] ny marainan'ny 10 desambra: ny sarintavan'ny Sir Arthur Lewis, izay nandrafitra ny “O” faharoa amin'ny Google Doodle tamin'io andro io ny lohany.
Nomena ny lokam-pahatsiarovana Nobel amin'ny toekarena ity mpahay toekarena teraka St Lucian, izay fantatra amin'ny “maodely Lewis” amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ity, tamin'ny taona 1979. Izy no mainty hoditra voalohany sy tokana hatramin'izao nahazo izao loka ifampitadiavana fatratra izao eo amin'ny sehatry ny siansa ara-toekarena.
Izy ihany koa no mpianatra mainty hoditra voalohany tafiditra—tamin'ny alalan'ny vatsim-pianarana, tsy latsa-danja—ho ao amin'ny London School of Economics (LSE), izay nananany hirika ho ampianarin'ireo mpisaina ara-toekarena lasa aloha indrindra tamin'izany vanim-potoana izany. Rehefa nahazo ny diplaoma i Lewis dia niasa fotoana vitsy tao amin'ny LSE, nialoha ny nampidirana azy ho anisan'ny mpampianatra oniversite tao amin'ny Victoria University of Manchester tamin'ny taona 1947.
Ao amin'ny lahatsary ho fahatsiarovana manazava ny antony nifidianana an'i Lewis ho lohahevitra amin'ny doodle, dia nanondro azy ny Google ho “profesora sady ekônônista Afrikanina-Amerikanina” izay “iray amin'ireo mpisava lalana amin'ny fampandrosoana ara-toekarena maoderina.”
Camilla Ru no nandravaka ny doodle, izay lazaina eto ihany koa fa artista monina ao Manchester, izay nandrafetan'i Lewis ny sasany amin'ireo tsirinkeviny goavana indrindra momba ny toekarena ho an'ny firenena andalampandrosoana fony izy tao amin'ny Oniversiten'i Manchester. Manana ny lanjany goavana dia goavana tokoa ho an'i Karaiba ireo tsirinkevitra ireo, noho ny tosika nataony hankany amin'ny fahaleovantenany manoloana ny Fanjakana Britanika tamin'ny faramparan'ny taompolo 1950.
Tamin'ny taona 1959 Lewis nifindra ho any Etazonia handray ny toeran'ny profesora tao amin'ny Oniversiten'i Princeton, izay niasany mandra-paharetirety azy tamin'ny taona 1983—saingy mbola nitoetra ho lehilahy karaibeana izy na teo aza izany rehetra izany.
Resy lahatra tanteraka tamin'ny hevitry ny praiminisitr'i Trinidad sy Tobago voalohany sady iray amin'ireo nandrafitra ny fahaleovantena karaibeana, ny Dr. Eric Williams, nitoetra ho mpinamana tsy nifankafoy ry zalahy ireo nandritra ny fiainany. Nampiasa ny fahalalàny ho amin'ny tombontsoan'ny faritra ihany koa i Lewis, raha niasa ho mpanolotsaina ara-toekarena ho an'ireo governemanta karaibeana maro, ka ao anatin'izany i Barbados, Jamaika, ary Trinidad sy Tobago. Tamin'ny taona 1959 izy notendrena ho Vice-Chancellor ny The University of the West Indies (The UWI na Oniversiten'i Les Antilles), ary tamin'ny taona 1970 izy no lasa filoha voalohany ny Caribbean Development Bank [Banky Fampandrosoan'i Karaiba].
Tao amin'ny lahatsoratra Facebook, nofehezin'i Amílcar Sanatan mpampianatra oniversite ny halehiben'i Lewis sy ny asany:
Mbola mitombina mandraka androany ny tsirinkevitr'i Lewis. Vao haingana, ny Profesora Sir Hilary Beckles, filohan'ny Vaomieran'ny fanonerana CARICOM, no nanonona izay nolazainy ho “karazan-tenin'i Arthur Lewis” ho lalana ho an'ny faritra raha miresaka fanonerana tamin'ny fanandevozana [mg].
Ity maodelim-pampandrosoana ara-toekarena ho an'i Karaiba ity dia nifototra tamin'ny hetsika henjana ho fanohanana ny fanavaozana ara-toekarena sy fitsinjarana ho ara-drariny kokoa ny harena — fomba fanatomorana iray izay, amin'ny fitenin'ny mpanoratra Jamaikana Geoffrey Philp hoe, tadiaviny ny hanalavirana amin'ny tantaran'ny “beasts of burden (betes de somme) noanganoina” ny faritra.